सौन्दर्य Archives | Kendrabindu Nepal Online News
कुन-कुन हुन् जाडो मौसमका लागि उपयोगी खानेकुरा ?
काठमाडौं । यतिबेला सबैतिर जाडो बढेको छ । अहिले सबैलाई जाडोकै चिन्ता छ । जाडोले स्वास्थ्यका हिसावले पनि केहिलाई दुःख दिने गर्छ भने केही जाडो मौसममा रमाउने गर्छन् । गर्मीको तुलनामा जाडोमा हामीलाई बढी भोक लाग्छ । शरीरको रगतमा पोषणको
२ पुष २०७७, बिहीबार १३:३२	२ पुष २०७७, बिहीबार १३:३२
काठमाडौं । जाडोमा कसरी स्वस्थ रहने? हामीले जाडो मौसममा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । जाडोमा विभिन्न खालका भाइरसहरू सक्रिय भइरहेका हुन्छन् । जसका कारण जाडो मौसममा रुघाखोकी, टन्सिलजस्ता संक्रमण बढिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसका कारण यो वर्षको जाडोमा
९ मंसिर २०७७, मंगलवार १७:१८	९ मंसिर २०७७, मंगलवार १७:१८
काठमाडौं । जाडो यामको सुरुवात भइसकेको छ । विशेषगरि जाडो मौसममा हामीलाई विभिन्न समस्याले सताउने गर्दछ । जसमध्येको एक हो कपालको समस्या । कपाल मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यसले हामीलाई सुन्दर र आकर्षक मात्र देखाउँंदैन छालाको हेरचाह गर्नमा
७ मंसिर २०७७, आईतवार १८:०८	७ मंसिर २०७७, आईतवार १८:०८
लसुन, अदुवा, मेथी र बेसार धेरै खाँदा सावधान ! यस्ता छन् ‘साइड इफेक्ट’
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ बाट लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुन आवश्यक छ । पछिल्ला केही महिनामा धेरै यस्ता खालका साइड इफेक्ट भएका बिरामी आएपछि गरिएको सर्वेक्षणमा कोभिड–१९ लाग्ने डरले अथवा रोग प्रतिरोधात्मक
१८ आश्विन २०७७, आईतवार १७:३३	१८ आश्विन २०७७, आईतवार १७:३३
विश्वसुन्दरी पुगिन् सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा
सिन्धुपाल्चोक । सन् २०१९ की विश्वसुन्दरी जमैकाकी टोनी एनसिन हमज शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा पुगेकी छिन् । सन् २०१९ की मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ र शृङ्खला खतिवडासँग उनी हेलम्बु पुगेकी हुन् । उनले हेलम्बुमा निर्माण भइरहेको घोप्टे ध्याङस्थित हिमालय पदमार्ग ‘ग्रेट
२४ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०६:४७	२४ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०६:४७
‘मिस वर्ल्ड -२०१९’ टोनी नेपालमा (भिडियोसहित)
काठमाडौं । ‘मिस वर्ल्ड -२०१९’ की विजेता जमैकाकी टोनी एन सिंह तीनदिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेकी छिन् । उनीसँगै मिस वर्ल्ड संस्थाका अध्यक्ष जुलिया मोर्ली र निर्देशक स्टीव डग्लससमेत नेपाल आएका छन् । बिहिबार विहान उनीहरुलाई स्वागत गर्नका लागि त्रिभुवन
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १३:३५	२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १३:३५
काठमाडौं । ‘द हिडन ट्रेजर’ले ‘मिस नेपाल २०२०’ का लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । मिस नेपालका प्राय सबै प्रक्रियाहरु विगतको जस्तै भएपनि यसपटक भने केहि नयाँपन थपिएको छ । मिस नेपालमा सहभागी हुन गत वर्षसम्म १९ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मको
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १९:४९	१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १९:४९
मिस नेपाल वर्ल्ड २०१९ अनुष्का श्रेष्ठले हालै लण्डनमा सम्पन्न भएको मिस वर्ल्ड पेजन्ट २०१९ मा आफूले महत्वपूर्ण विषयलाई उठाएको बताएकी छिन् । उनले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिस वर्ल्ड पेजन्टमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्ने समेत बताइन् । उनले सिन्धुपाल्चोकको
८ पुष २०७६, मंगलवार ०९:००	८ पुष २०७६, मंगलवार ०९:००
मिस वर्ल्ड २०१९ को ताज टोनीलाई
काठमाडौं । यस वर्षको मिस वर्ल्ड २०१९ को उपाधि जमैकाले जितेको छ । जमैकाकी टोनी एन सिंले सो उपाधि जितेकी हुन् । शनिबार लन्डन एक्सेलमा सम्पन्न भएको ६९ औं ‘मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता’ को ग्राण्ड फिनालेमा टोनीले १२५ देशका सुन्दरीहरूलाई पछि
२९ मंसिर २०७६, आईतवार ०५:५४	२९ मंसिर २०७६, आईतवार ०५:५४
काठमाडौं । मिस फारवेष्ट नेपाल २०१९ को दोस्रो संस्करणको लागि आवेदन फारम सुरु भएको छ । रोयल कोलावोरेटिभ्स प्रालिको आयोजनामा सञ्चालित मिस फारवेष्ट नेपालको दोस्रो संस्करणको लागि आवेदन फारम भर्न सुरु भएको हो । मिस फारवेष्ट नेपाल सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो
२५ भाद्र २०७६, बुधबार १९:०४	२५ भाद्र २०७६, बुधबार १९:०४
दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई दोनों को इक अदा में रजामन्द कर गई मिर्जा गालिबको यो शेरले सम्झना गराउँछ सौन्दर्यको अप्रतिम मूर्ति । जसको हेराइमा घायल नहुने पुरुष हृदय शायदै पाइएलान् । हो हामी कुरा गर्दै छौँ
११ भाद्र २०७६, बुधबार १३:५०	११ भाद्र २०७६, बुधबार १३:५०
कपाल झरेर, टुक्रेर अनि हाँगा पलाएर हैरानी खेप्ने मानिसहरू थुप्रै छन् । संसारभरका मानिस यस्तो समस्याबाट पीडित छन् । उसो त एक दिनमा १०० वटासम्म कपाल झर्नुलाई सामान्य मानिन्छ तर जब यो संख्यामा बढोत्तरी हुनथाल्छ तब चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हुनजान्छ
९ श्रावण २०७६, बिहीबार १७:५४	९ श्रावण २०७६, बिहीबार १७:५४